Home Wararka Shacab biyo ku rogmadeen oo laga soo badbaadiyay togga Garowe
Shacab biyo ku rogmadeen oo laga soo badbaadiyay togga Garowe
Roobabkii lagu diirsaday ee ka da’aday magalaada Garowe ayaa khasaari ka dhasheen, dad badan ayaa ku barakacay, halka kuwa kalana laga soo badbaadiyay ka dib markii ay ku soo rogmadeen biyo ku socday Togga Garowe.
Dhanka kale , shacabka iyo Laamaha Amniga Garoowe oo is kaashanaya, ayaa xalay soo badbaadiyay nin oday ah oo ku go’doomay biya ku soo rogmay togga magaalada Garoowe. Oday Xasan Maxamed Cumar, ayaa fiidnimadii xalay ku go’doomay bartamaha togga, kadib markii biya ku soo rogmeen, xilli uu ka baxay magaalada, islamarkaana ku sii jeeday xerada Taliska ciidamada Daraawiishta Puntland ee 54-aad oo ku taalla dhinaca waqooyi ee caasimadda.
Kadib saddex saacadood oo uu ku go’doonsanaa togga dhexdiisa, ayaa markii dambe lagu guulaystay in la soo badbaadiyo, sida ay sheegeen saraakiisha Laamaha Amniga Garoowe. Oday Xasan ayaa u mahadceliyay dhammaan dadkii ka qayb-qaatay badbaadintiisa, gaar ahaanna rag dhalinyaro ah oo ka soo saaray halkii uu ku go’doonsanaa mudda saddex saacadood ah.
Sida isagu caddeeyay, da’diisu waa lixdan sano jir, waxaana mar lagu qabtay dagaalkii ‘77’ ee dhexmaray Soomaaliya iyo Itoobiya, isagoo dhaawacan, kadibna wuxu kamid noqday maxaabiistii ay is weydaarsadeen labada dal.